ယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တဲ့ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်စီးခဲ့သော ချက်ပလက်ကားကြီး - Latest Myanmar News
October 18, 2019 Latest Myanmar News ဗဟုသုတ 0
ရှမ်းပြည်နယ် လွိုင်လင်မြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် သီတာလမ်း ရှိ ဂေါ်ရခါး လူမျိုး ဒေါ်မီး နား အိမ် တွင် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင် သော အဖွဲ့အား လွိုင်လင်မြို့မှ ပင်လုံမြို့သို့ လိုက်လံ ပို့ဆောင် ပေးသော ချက်ပလက်ကားကို ယနေ့တိုင် အမှတ်တရအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။..
ပင်လုံစာချုပ်ဖြင့် တိုင်းရင်းသား အားလုံး ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုအောက် မှ အတူတကွ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ အနာဂတ်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်း နှီးနှောဖလှယ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ် ရေးရရန် လမ်းစပွင့်ခဲ့သော ပထမပင်လုံအစည်းအဝေးကို ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ် ၂၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်ထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး တောင်တန်းနှင့် ပြည်မ ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ်ရေးရယူမည် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသည့် သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ၂၃ ဦးတို့က ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်(ဗုဒ္ဓဟူး နေ့)နံနက် ၁ဝ နာရီက အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ရာ အဆိုပါ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အသွားတွင် ဒေါ်မီးနား၏ ဖခင် ဦးကံချားက ၎င်းကိုယ်ပိုင် ချက်ပလက် ခ/၈၂၁၇ ဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ သော ယာဉ် ဖြစ်သောကြောင့် ယနေ့တိုင်ထိန်း သိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။.
”ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၆၈ နှစ်က ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ လွိုင်လင်ကနေ ပင်လုံမြို့ကို ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သူ့အဖွဲ့တွေ အသွားမှာ ဖေဖေက သူ့ကားနဲ့ လိုက် ပို့ခဲ့တာ ပါ။ ဖေဖေမရှိတော့ပေမယ့် သမိုင်းဝင်အမှတ်တရဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကားကို မရောင်းဘူး။ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ” ဟု ယခုအခါ အသက် ၅ဝ ကျော် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် သမီး ဖြစ်သူ ဒေါ်မီးနားက ပြောသည်။
သမိုင်းဝင် ပင်လုံညီလာခံကြီးကို (ဒုတိယအကြိမ်) ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ပင်လုံမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် (စနေထောင့်)၌ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပင်လုံညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သောဘုရင်ခံ အမှုဆောင်ဝန်ကြီးများ၊ နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အရာရှိများ၊ မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သတင်းစာ ဆရာများ၊ နိုင်ငံခြား သံကိုယ်စားလှယ် ကောင်စစ်ဝန်များ၊ မြန်မာပြည်၌ ထင်ရှား ကျော်ကြားခဲ့သော ထိပ်သီး ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရှမ်းစော်ဘွားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လူထု ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ၂၃ ဦးတို့ က ပြည်မနှင့h် တောင်တန်း ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ် ရေးရယူရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Source – moi.gov
ရှမျးပွညျနယျ လှိုငျလငျမွို့ အမှတျ(၁)ရပျကှကျ သီတာလမျး ရှိ ဂျေါရခါး လူမြိုး ဒျေါမီး နား အိမျ တှငျ ပငျလုံစာခြုပျခြုပျဆိုရနျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ဦးဆောငျ သော အဖှဲ့အား လှိုငျလငျမွို့မှ ပငျလုံမွို့သို့ လိုကျလံ ပို့ဆောငျ ပေးသော ခကျြပလကျကားကို ယနတေို့ငျ အမှတျတရအဖွဈ ထိနျးသိမျးထားဆဲ ဖွဈကွောငျး သိရ သညျ။..
ပငျလုံစာခြုပျဖွငျ့ တိုငျးရငျးသား အားလုံး ဗွိတိသြှအုပျခြုပျမှုအောကျ မှ အတူတကှ ပွနျလညျ လှတျမွောကျခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး တိုငျးရငျးသားအားလုံး၏ အနာဂတျအရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမွငျခငျြး နှီးနှောဖလှယျခှငျ့နှငျ့ လှတျလပျ ရေးရရနျ လမျးစပှငျ့ခဲ့သော ပထမပငျလုံအစညျးအဝေးကို ၁၉၄၆ ခုနှဈ မတျ ၂၆ ရကျမှ ၂၈ ရကျထိ ကငျြးပခဲ့ပွီး တောငျတနျးနှငျ့ ပွညျမ ပူးပေါငျး၍ လှတျလပျရေးရယူမညျ ဖွဈကွောငျး သကျသပွေသညျ့ သမိုငျးဝငျ ပငျလုံစာခြုပျကို ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျးနှငျ့ တိုငျးရငျးသား ကိုယျစားလှယျ ၂၃ ဦးတို့က ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၁၂ ရကျ(ဗုဒ်ဓဟူး နေ့)နံနကျ ၁ဝ နာရီက အောငျမွငျစှာ လကျမှတျရေးထိုး ခြုပျဆိုနိုငျခဲ့ရာ အဆိုပါ ပငျလုံစာခြုပျ ခြုပျဆိုရနျ အသှားတှငျ ဒျေါမီးနား၏ ဖခငျ ဦးကံခြားက ၎င်းငျးကိုယျပိုငျ ခကျြပလကျ ခ/၈၂၁၇ ဖွငျ့ ပို့ဆောငျခဲ့ သော ယာဉျ ဖွဈသောကွောငျ့ ယနတေို့ငျထိနျး သိမျးထားခွငျးဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။.
”ဟိုးလှနျခဲ့တဲ့ ၆၈ နှဈက ပငျလုံစာခြုပျခြုပျဆိုဖို့ လှိုငျလငျကနေ ပငျလုံမွို့ကို ဗိုလျခြုပျနဲ့ သူ့အဖှဲ့တှေ အသှားမှာ ဖဖေကေ သူ့ကားနဲ့ လိုကျ ပို့ခဲ့တာ ပါ။ ဖဖေမေရှိတော့ပမေယျ့ သမိုငျးဝငျအမှတျတရဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီကားကို မရောငျးဘူး။ ဆကျလကျ ထိနျးသိမျးသှားမှာပါ” ဟု ယခုအခါ အသကျ ၅ဝ ကြျော အရှယျရှိပွီဖွဈသညျ့ သမီး ဖွဈသူ ဒျေါမီးနားက ပွောသညျ။
သမိုငျးဝငျ ပငျလုံညီလာခံကွီးကို (ဒုတိယအကွိမျ) ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၃ ရကျမှ ၁၃ ရကျအထိ ပငျလုံမွို့၏ အနောကျတောငျဘကျ (စနထေောငျ့)၌ ကငျြးပခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး အဆိုပါ ပငျလုံညီလာခံတှငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ခေါငျးဆောငျသောဘုရငျခံ အမှုဆောငျဝနျကွီးမြား၊ နယျခွားဒသေ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့မှ အရာရှိမြား၊ မွနျမာပွညျ နိုငျငံရေး အဖှဲ့အသီးသီးမှ ကိုယျစားလှယျမြား၊ သတငျးစာ ဆရာမြား၊ နိုငျငံခွား သံကိုယျစားလှယျ ကောငျစဈဝနျမြား၊ မွနျမာပွညျ၌ ထငျရှား ကြျောကွားခဲ့သော ထိပျသီး ပုဂ်ဂိုလျမြား၊ ရှမျးစျောဘှားကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ လူထု ကိုယျစားလှယျမြား၊ တိုငျးရငျးသား ကိုယျစားလှယျ ၂၃ ဦးတို့ က ပွညျမနှင့hျ တောငျတနျး ပူးပေါငျး၍ လှတျလပျ ရေးရယူရနျ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။